यस कारण घाँसमा खाली खुट्टा हिँड्नुहोस्
काठमाडौं - घाँसमा जुत्ता लगाएत हिँड्नु भन्दा खाली खुट्टा हिँड्नु फाइदाजनक छ । घाँसमा खाली खुट्टा हिँड्दा विभिन्न रोगबाट राहत पाउन सकिन्छ ।यस्ता छन् फाइदाहरुःअनिद्रालाई नियन्त्रण गर्छ– कतिपयलाई निद्रा नलाग्ने समस्याले साताउँछ । जसलाई स्लिपिङ डिसअर्डर ...
यस्ता छन् दही चिउरा खानुका फाइदाहरु
काठमाडौँ - आज असार १५ अथार्त दही चिउरा खाएर धान दिवस मनाउने दिन । नेपाली समाजमा आजबाट रोपाइ शुरु गरीन्छ र दही चिउरा खाएर मनाउने परम्परा छ ।सामाजिक सञ्जाल पनि आज दही चिउराका पोष्टहरुले भरिएको छ । दही चिउरा खादा मिठो मात्र होइन यसले स्वास्थ्यका लागि पन ...
किन हुन्छ ग्याष्ट्रिक, ठीक हुन के गर्ने ?
एजेन्सी - आजभोलि धेरै ग्यास्ट्रिकको समस्या लिएर अस्पताल जाने गर्छन् । ग्यास्ट्रिक नभएका मानिस भेट्न मुस्किल पर्छ । यो समस्या विभिन्न कारणले देखा पर्छ ।ग्यास्ट्रिक नेपालीको राष्ट्रिय रोग हो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन । धेरैको ग्यास्ट्रिक गुनासो सुन्न प ...
काठमाडौं - डाक्टर तथा पोषण विज्ञहरुको सल्लाह अनुसार मानिसले दिनमा कम्तिमा पनि ८ गिलास वा झण्डै दुइ लिटर पानी पिउनु अनिवार्य हुन्छ । तर दिनभरमा कति पानी पिउने भन्ने कुरा मानिसको सरीरको वजन तथा जिउडालमा भर पर्छ । कत्रो जिउ भएका मानिसले कति पानी पिउने ? ...
यस्ता समस्याले फेल हुन्छ मिर्गौला, अवश्य जान्नुहोस्
काठमाडौं - शरीरमा रगत शुद्ध पार्ने प्रमुख अंग हो, मिर्गौला । यो बिस्तारै काम नलाग्ने हुँदै गएको धेरैलाई थाहा हुँदैन । मिर्गौलामा समस्या आउँदा सुरु–सुरुमा कुनै पनि लक्षण देखिँदैनन् । जब लक्षण देखापर्न थाल्छन् , त्यतिवेला मिर्गौला ६० देखि ७० प्रतिशतसम् ...
गर्मीमा प्रशस्त पानी पिउनुहोस्
काठमाडौं – बढ्दो गर्मीसँगै यसबाट जोगिन विभिन्न उपाय अपनाउन डाक्टरले सुझाव दिएका छन् । केही दिनयता तराईलगायत देशैभर गर्मी बढेकाले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।गर्मीमा पकाइएको खानेकुरा केही घन्टामै बिग्रने भएकाले बासी तथा सडेगलेका खानेकुरा नखान, धेर ...